Raad Raac News Online – Wasiirka gaashaandhiga iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo.
Wasiirka gaashaandhiga iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo.
Moos Bukeeni January 2, 2013 Comments Off on Wasiirka gaashaandhiga iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydbaho ee xarunta gobalka Baay ayaa waxay sheegayaan in maanta ay halkaasi gaadheen xubno ka tirsan saraakiisha amniga dowlada federaalka Soomaalia.
Wefdiga dowlada federaalka Soomaalia ee gaaray Baydhabo ayaa waxaa la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakin Maxamuud Xaaji Fiqi,waxaana safarkan uu qeyb ka yahay safaro uu maalmahan ku marayo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in socdaanla Wasiirka Gaashaandhiga ay ku wehlinayaan xubno ka tirsan golaha xildhibaanada Soomaalia oo ay ka mid yihiin Maxamed Ibraahim Xaabsade iyo Maxamed Xuseen Afaraale iyo saraakiil ciidan.
Kulan ayaa la sheegayaa in haatan xarunta ADC-da ay ku leeyihiin Wafdiga wasiirka, saraakiisha ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo Saraakiisha Itoobiya.
Socdaalka wafuudan ee ku began Baydhabo ayaa waxay tahay sidii xubnaha saraakiisha maamulka iyo gobalka Baay iyo ciidanka halkaasi ku sugan isaga wada kaashan lahaayeen ka shaqeynta aniga gobalka gaar ahaan Baydbabo.
Wararka ayaa sheegaya in Wasiirka uu wado lacago mushaaraad ah oo la siinayo Ciidamada dowladda ee ku sugan gobolada Bay iyo Bakool, kuwaasoo maalmihii u dambeeyay ka cabanayay mushaar la’aan.
Hase ahaatee Wasiirka gaashaandhiga ayaa ka hor inta aanu Baydhabo gaadhin waxaa uu horay booqasho ugu tagay magaalooyinka Garbahaarey, Jowhar, Kismaayo iyo Marka, waxaana la xiriirta sidii loo dar dar gelin lahaa howl galka lagula dagaalamayo Al-Shabaab, isagoo ciidamada dhiira gelinayay.